ကျွန်တော်နှင့် ကလေးစာကြည်တိုက် | Mg Ogga's Notes
မြန်မာပြည်က နယ်တွေမှာ ကျွန်တော်ကလေးတွေအတွက် စာကြည့်တိုက်တွေ လုပ်ပေးချင်ခဲ့တာ ကြာပါပြီ။ ကံအားလျော်စွာပဲ ကလေးစာကြည်တိုက်လုပ်ဖို့ အခွင့်အရေးတွေပေါ်လာတယ်။ ပထမတစ်ခေါက်က ပွင့်ဖြု ဖိုးပေါက်ကျောင်းမှာ ကလေးစာကြည်တိုက်လုပ်ဖို့ ရွာက ကာလသား ကာလသမီးတွေနဲ့ ကျောင်းဆရာမအချို့ကို သင်တန်းပေးခဲ့တယ်။ စာကြည်တိုက်တစ်ခု ပီပီပြင်ပြင်ဖြစ်လာအောင်တော့ မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ ပုံပြောရတာ တစ်ဖက် စာကြည်တိုက်အတွက်သင်တန်းပေးရတာတစ်ဖက်နဲ့မို့ သေသေချချာမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ အဲဒီအခေါက်က ဓမ္မရိပ်မဂ္ဂဇင်းအယ်ဒီတာအဖွဲ့က ကမကထလုပ်ခဲ့တာ။ ဒီနှစ်အတွင်းမှာပဲ မဲဇာလီကုန်း တိုက်နယ်က ဘကကျောင်းတစ်ခုမှာ စာကြည့်တိုက် ဆက်လုပ်ဖြစ်တယ်။ ဒီစာကြည့်တိုက်ကတော့ လုပ်ပြီးသားပုံစံကို ပိုစနစ်ကျသွားအောင် ကျွန်တော်အဖွဲ့ထဲက စာကြည့်တိုက်နှင့်သုတပညာကို မဟာဘွဲ့ ရထားတဲ့ ကျွန်တော်တို့ အမ မနွေးက လုပ်ပေးခဲ့တယ်။ အဲဒီတုန်းကလည်း ဘကကျောင်းက ဆရာမ တစ်ယောက် နှစ်ယောက် လောက်ကိုပဲ ပြောပြဖြစ်တယ်။
တကယ်တော့ ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့ ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ ကလေးစာကြည့်တိုက်က ဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘူး ဆရာဆရာမ ရပ်ရွာခေါင်းဆောင်တွေက ကလေးတွေအတွက်လုပ်ပေးတဲ့စာကြည်တိုက်မျိုး မဟုတ်ဘူး ကလေးတွေကိုယ်တိုင်လုပ်တဲ့၊ ကလေးတွေကိုယ်တိုင်ထိန်းသိမ်းတဲ့၊ ကလေးတွေကိုယ်တိုင်အသုံးပြုတဲ့ ကလေးစာကြည်တိုက်မျိုး …………….
ဒီလိုအတွေးမျိုးကို အိန္ဒိယမှာ နေနေတဲ့ တိဗက်ပညာရေးကျောင်းတွေက ကလေးစာကြည်တိုက်တွေကို ကြည့်ရင်း စိတ်ကူးမိတာပေါ့။ စာအုပ်တွေကို ၃ မျိုးခွဲထားတယ်။ ဒါတွေကတော့ ပုံနည်းစာများ၊ ပုံရောစာရော(ပုံနဲ့စာအတူတူလောက်)၊ ပုံများစာနည်း ဆိုပြီး ၃ မျိုးခွဲတယ်။ နောက် ဒူဝီဒဿမစနစ်ကို အသုံးပြုတယ် ဒါလည်းပါတယ် ခက်ခက်ခဲခဲတွေမဟုတ်ပဲ ၀၀၁ ကနေ ၀၉၉ အထိလောက်ကို စက်ဝိုင်းပြား ပေါ်မှာပဲ ကတ်တလောက်ခေါင်းစဉ်အလိုက် ပုံလေးတွေပြပြီးရှင်းပြထားတယ်။ ကလေးတွေနားလည်အောင် ရိုးရိုးလေး လုပ်ထားတာ။ စာကြည်တိုက်ထဲ ကလေးတွေဝင်ထွက်သွားလာနေတာမှ ဆူညံ့နေတာပဲ မဆူညံရဆို တဲ့ စာသားလည်းမကပ်ထားဘူး၊ ကလေးတွေကလည်း အကြောက်အလန့်မရှိ မှောက်လျက်စာဖတ်သူဖတ် ဆောင့်ဆောင့်ထိုင်ပြီး စာဖတ်သူဖတ်နေကြတယ်။ ကျောင်းတက်ချိန်ပြန်ရောက်ရင် ကလေးတွေက သူတို့စာယူ ဖတ်တဲ့နေရာ သူတို့ပြန်ထားတယ်။ ဒီလိုပြန်ထားတာလည်း ဆရာမကို ကြောက်လို့မဟုတ်ဘူး သူတို့ အသိစိတ်ဓာတ်နဲ့ သူတို့ထားကြတယ်။
ကျွန်တော်လုပ်ပေးချင်တာ ဒီလိုစာကြည့်တိုက်မျိုး ကလေးတွေကို အမှန်တကယ်ကြီး အသိဥာဏ်ဝေမျှ နိုင်တဲ့ စာကြည်တိုက်မျိုးသာလုပ်ချင်တယ်။ ကလေးတွေအတွက် အကြောက်တရားထွန်းကားစေမဲ့ စာကြည့်တိုက်မျိုး မဖြစ်စေချင်ဘူး။ ကလေးတွေ စာအုပ်တွေကို မထိရဲမကိုင်ရဲ မဖြစ်စေရဘူး။ သူတို့ဘာသာ သူတို့စာကြည့်တိုက်ကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့ အလေ့အထမျိုးထွန်းကားစေမယ့် စာကြည့်တိုက်မျိုး…………….
ဒီလိုစာကြည့်တိုက်မျိုးလုပ်ဖို့ စိတ်ကူးအိမ်မက်တွေမက်နေရင်း သိပ်မကြာခင်မှာပဲ တကယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေကြီး ဓမ္မရိပ်အယ်ဒီတာ ဦးမိုးထွန်း(ဦးကျော်သွင်)ရဲ့ အဆက်သွယ်နဲ့ ရွှေမန္တလာအဝေးပြေးယာဉ်လိုင်းက ဦးခင်မောင်လတ်နဲ့ ချိတ်မိပြီး ကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့ ဖြစ်စေချင်တဲ့ စာကြည့်တိုက်လေးကို လုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဦးခင်မောင်လတ်က သူတို့ရွာက အထက်တန်းကျောင်းမှာ ရွှေမန္တလာ ဆိုပြီး စာကြည့်တိုက်အဆောက်အအုံနဲ့ အတွင်းပရိဘောဂတွေအပြင် စာအုပ်တွေကိုပါ လှူဒါန်းတယ်။ ဒါပေမယ့် စာကြည့်တိုက်ထိန်းသိမ်းမဲ့သူ စာကြည့်တိုက်မှုးမရှိဖြစ်နေတယ်။ စာကြည့်တိုက်က လှူသူရှိပေမဲ့ အသုံးပြုသူမရှိရင် စာအုပ်ဂိုထောင်ပဲလေ။ ဒီတော့ရေရှည်ဆက်အသက်ရှည်နိုင်မဲ့ စာကြည့်တိုက်ဖြစ်ဖို့ က အသုံးပြုသူကိုယ်တိုင်က စာကြည့်တိုက်ကို ထိန်းသိမ်းသူ ဖြစ်နေရင် စာကြည်တိုက်လေး အသက်ရှည်နိုင်မယ်။ အဲဒါနဲ့ စာကြည့်တိုက်အတွက် မိထ္တီလာနဲ့ကျောက်ပန်းတောင်းနယ်ခြား အထက်တန်းကျောင်းခွဲလေးက ကလေးတွေကိုသင်တန်းပေးဖို့ ကျွန်တော်လက်ခံခဲ့တယ်။
စာကြည့်တိုက်အတွက် သင်တန်းပေးဖို့ဆိုတော့ ကျွန်တော်က စာကြည့်တိုက်ပညာကို ဘာမှသိပ်တတ်လှတာ မဟုတ် စာ/သု က ဆရာဦးသိန်းလွင်တို့ဆီက နဲနဲကြားဖူးနားဝရှိတာရယ် စာ/သု မှာ ကျောင်းတတ်နေကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေဆီက နဲနဲကြားဖူးတာရယ် ပဲရှိတယ်။ နောက်သင်ရမယ့် အရွယ်တွေက လည်း အလယ်တန်းနဲ့ အထက်တန်းအဆင့်ကျောင်းသားတွေ ဆိုတော့ လက်ခံလိုက်ရပေမယ့် ခပ်ကြောက်ကြောက်ပဲ။
ဒီသင်တန်းအတွက် ကျွန်တော်တစ်ယောက်ဆို မနိုင်မနင်းဖြစ်မှာဆိုးတာကြောင့် မိထ္တီလာမှာ ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေ လုပ်နေတဲ့ Third Eye Education Foundation က ညီမလေးပြေဦးမေနဲ့ ညီလေးဟိန်းရာဇာတို့ကို အကူညီတောင်းရတယ်။ သူတို့ ကူညီလိုလည်း အလုပ်ဖြစ်ခဲ့တာ။ အစက သင်တန်းသားတွေကို ၁၅ ယောက်လောက်ပဲ လိုပြောထားပေမယ့် နောက်တော့ အယောက် ၂၀ ယောက်ဖြစ်လာတယ်။ သင်တန်းသားတွေနဲ့အတူ ရောတက်တဲ့ ဆရာမလေး ၃ ယောက် ၄ ယောက်လောက်လည်း ရှိတယ်။ စစချင်း ကလေးတွေကို စာကြည့်တိုက်ဆိုတာ ဘာလဲ ဘာလုပ်လို့ ရတဲ့အရာလဲ၊ ဘာကြောင့်လုပ်တာလဲ ဆိုတာကို နဲနဲဆွေးနွေးပြီး B5လုံး အကြောင်းပြောတယ်။ နောက် ကလေးတွေကို စာအုပ်တွေ ပေးပြီး သူတို့ဘာသာ စာအုပ်တွေကို အမျိုးစားခွဲခိုင်းတယ်။ အမျိုးစားကတော့ သိတဲ့အတိုင်း ၃မျိုးပဲ ပုံနည်းစာများ၊ပုံရောစာရော၊ပုံများစာနည်းဆိုပြီး ခွဲခိုင်းတာပါ။ နောက် စာအုပ်တွေကို လယ်ဂျာစာအုပ်မှာ စာရင်းသွင်းနည်းကိုပြောပြတယ်။ နောက်ပိုင်း စာကြည်တိုက် အဆောက်အဦးဆီသွားပြီး သန့်ရှင်းရေးလုပ်သူကလုပ် စာရင်းသွင်းသူကသွင်း စာအုပ်အနှောင့်မှာ စာရွက်ကပ်သူက ကပ် သူတို့ကိုယ်တိုင် လုပ် ခိုင်းတယ် ဆရာမတွေကိုတော့ ကလေးတွေ မလုပ်နိုင်တဲ့ အလုပ်တွေမှ ကူပြီး လုပ်ခိုင်းရတယ်။ ဒီလိုပဲ တစ်ရက်ကုန်ပြီး ညနေစောင်းတဲ့ အချိန်မှာ စာကြည့်တိုက်လေးဟာ ရုပ်လုံးပေါ်လာတယ်။ ကျွန်တော် ပျော်ပါတယ်။ သူတို့လည်း ပြီးရော ကျွန်တော်လည်း တုပ်ကွေးမိပြီးတစ်ညလုံး ဖျားတော့တာပဲ။ နောက်နေစာကြည်တိုက်ဖွင့်ပွဲကို ကျွန်တော်နေမကောင်းပေမဲ့ သွားတတ်တယ်။ ကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တဲ့ လုပ်ချင်နေတဲ့ ကလေးစာကြည့်တိုက်လေး ကျွန်တော်ရှေ့မှာ မျက်ဝါးထင်ထင်မြင်နေရပြီ ကျွန်တော်ပျော်တယ်။ နောက်ပိုင်း ဒီစာကြည့်တိုက်လေး အသက်ဘယ်လောက်ရှည်မယ်ဆိုတာ သေချာမပြောနိုင်ပေမဲ့ ငွေကြေးအရင်း အဆောင်အဦးကလွဲ ကလေးတွေကိုယ်တိုင်လုပ် ကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ စာကြည့်တိုက်ဆိုတာ တော့သေချာပါတယ်။ ကျွန်တော်ကို ကူညီပြီးသင်တန်းမှာ ကူညီင်္လုပ်ကိုင်ပေးကြတဲ့ ညီမလေးပြေဦးမေ၊ ညီလေးဟိန်းရာဇာ၊ စာကြည့်တိုက်ဒါယိကာဦးလတ်(ဦးခင်မောင်လတ်)၊ ချိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ ဦးမိုးထွန်း(ဓမ္မရိပ်) နဲ့ ရွာကျောင်းက ဆရာ ဆရာမများ အားလုံး အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
p.s: မန္တလေးရတနာပုံတက္ကသိုလ်မှာ စာကြည်တိုက်နဲ့သုတပညာကို သင်ယူနေတဲ့ ညီမလေးအိမ်သူခင် ဖတ်ဖို့
June 27, 2013 in ကလေးစာပေ, ခရီးသွားမှတ်တမ်း, လူမှုဖွံဖြိုးရေး, အတွေ့အကြုံ, ဆောင်းပါး. Tags: children
← မေမေ မွေးနေ့ အတွက်
ဂုံညင်း (မွန်ရိုးရာကစားနည်း) ဝိုင်မ်ဟနဂ် →